Bilowga xannibaadda oo ah xalka xogta aaminka ah waa isbeddel la soo dhaweynayo. Hadda intan ka sii badan, maaddaama baraha bulshada ay ka faa'iideysanayaan joogitaankooda baahsan si joogto ah loogu xadgudbo asturnaanta dadka. Waa xaqiiqo. Xaqiiqda ayaa soo jiidatay cabasho ballaaran oo dadweynaha sanadihii la soo dhaafay.
Maxaa xal u ah xaaladan foosha xun? Nidaam aqoonsi oo ku saleysan xannibaad. Muddada.
Badanaa, waxaa jira u janjeera in lagu xiro tiknoolajiyada xannibaadda Bitcoin. Laakiin, waa wax badan oo ka badan oo kaliya buug-yare si loo dejiyo macaamilada Bitcoin. Lacagta la socota, xannibaadda ayaa leh awood ku filan oo ay dib ugu qeexdo maareynta silsiladda bixinta, xaqiijinta xogta, iyo ilaalinta aqoonsiga.
Waa hagaag, taasi waa sababta oo ah mid kasta block Xogta ku saabsan xannibaadda waxaa lagu xaqiijinayaa cryptographically iyada oo loo marayo algorithms hashing. Xogta waxaa xaqiijinaya shabakad kumbuyuutaro ah kahor intaan la gelin buugga, iyadoo laga takhalusi doono suurta galnimada wax isdaba marin, jabsiga, ama la wareegida shabakad xun.
Korsashada Blockchain ayaa wali wajaheysa caqabado adag. Teknolojiyada ayaa cadeysay inay tahay mid ku habboon ilaalinta xogta xasaasiga ah, laakiin fikradda ah in si dhab ah loo maro geeddi-socodka ayaa u muuqda mid cabsi leh. Dadku wali si buuxda uma fahmin xannibaadda waxayna u muuqdaan inay ka baqayaan wax badan oo ka mid ah ereyada farsamada, isdhexgalka isticmaaleyaasha isku dhafan, iyo bulshooyinka horumarineed ee la soo koobay.
Tani waxay xanibtay koritaanka warshadaha xannibaadda. Waxay ka soo wareegatay 12 sano tan iyo markii Satoshi Nakamoto uu adduunka u soo bandhigey xannibaadda ugu horreysa, in kasta oo ay awood u leedahay seminal, DLT wali ma helin kala-guur ku filan.
Xitaa ururradu waxay macaamiishooda ku dhex raaci karaan nidaamka deegaanka ee xannibaadda iyagoo si aan kala go 'lahayn u abuuraya astaamahooda (macaamiishooda) baahinta baahidooda warbaahinta bulshada ee jira.
Fikradda ka dambeysa ayaa ah in la yareeyo murugsanaanta helitaanka codsiyada xannibaadda. Xalka Aqoonsiga ORE ID ee AIKON wuxuu macno macquul ah ka bixinayaa amaahda dhaqankii hore u jiray ee codsiyada dhaqameed ee awood u siinaya marinka bulshada.
Si ka duwan barnaamijyada warbaahinta bulshada, iskudhafyada adeegsadayaasha barnaamijka adag ee xannibaadda ayaa ah caqabadaha ugu muhiimsan ee ka hortagaya tiknoolajiyada xannibaadda inay la kulmaan korsasho ballaaran. Dadka aan farsamada u fiicnayn waxay dareemayaan faquuq iyo ma dareemayaan dhiirigelin ku filan inay hore ugu socdaan iyagoo adeegsanaya adeegyada ku saleysan xannibaadda.
Iskudhaf la’aan aan kala go ’lahayn oo ku saabsan xannibaadaha iyo aaladaha warbaahinta bulshada (iyada oo loo marayo isdhexgalka isticmaalaha ee dareenka leh) ayaa ka caawin kara ganacsiyada iyo shirkadaha dadaal la’aan dusha macaamiishooda dusha sare ee 'DLT bandwagon', taasoo dhiirrigelinaysa tiknoolajiyada tirada badan. Dadku waa inay awoodaan inay adeegsadaan adeegyada xannibaadda iyagoo ku galaya emailkooda, taleefankooda, ama soo galitaanka bulshada. Looma baahna in la fahmo dhammaan waxyaabaha aasaasiga u ah tiknoolajiyada baahsan.
Tags: aikonalvin changxaqiijinSeeraarblockchainAqoonsiga xannibaaddaCambridge Analyticaxaqiijinasturnaanta macluumaadkaFacebookcalaamadee zuckerbergmsg globalmacdan idp2piskufilka-fadeedgaarka ahwarbaahinta bulshadaasturnaanta warbaahinta bulshadaxaqiijinta